Ururka Warbaahinta Soomaaliyeed ee SOMA oo tababar saxaafadeed u soo xiray 20 Wariye | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Ururka Warbaahinta Soomaaliyeed ee SOMA oo tababar saxaafadeed u soo xiray 20...
Ururka Warbaahinta Soomaaliyeed ee SOMA oo tababar saxaafadeed u soo xiray 20 Wariye
Xaflad lagu soo xirayay Tababar Socday mudo Sadax Maalmood ah oo ay ka faa’ideysteen 20 wariye oo ka ka socday 20 idaacadood ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay Hotel Ramaada ee magaalada Muqdisho.
Tababarka waxaa soo qabanqaabiyay Ururka Warbaahinta Soomaaliyed ee SOMA oo ay ku mideysan yihiin 40 idaacadood oo ku yaalla Soomaaliya iyagoo la kaashaday hay’adaha IMS, FOJO iyo idaacadda arrimaha bini aadaninimada ee Ergo.
Hadaba munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay wariyayaashii qaatay tababarka ayaa caawa lagu qabtay Hotelka SYL ee Magaalada Muqdisho,waxaana Munaasabada ka soo qeyb galay Masuuliyiin ka kala socday Wasaarada Warfaafinta, Madaxda Ururrada Saxaafada Soomaliyeed iyo qaar mid ah Agaasimiyaasha Warbaahinta Muqdisho.
Xoghayaha Guud ee SOMA Ismaaciil Sheekh Khaliifa oo ka hadlay munaasabadda shahaadooyinka lagu gudoonsiiyay wariyayaashaas ka socday idaacadaha ku mideysan ururka SOMA ayaa ka hadlay muhiimadda tababarrada caynkan ah ay u leeyihiin wariyayaasha.
Xoghayaha ayaa sheegay in wariyayaasha qaatay tababarka laga filayo in isbaddal laga dareemo xirfaddooda saxafinnimo, gaar ahaanna barnaamijka wadaagga ah ee ay soo saaraan iadaacadaha ku mideysan SOMA.
sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha Wasaaradda Warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf (AL Cadaala) wuxuuna ku bogaadiyay SOMA howsha muhiimka ah ee ay ka hayso warbaahinta, isagoo wariyayaasha ka faa’deystay tababarka ku guubaabiyay in ay dhaqan galiyaan aqoonta ay barteen intii uu tababarku socday, isla markaana ay la wadaagaan suxufiyiinkta ay wada shaqeeyaan.
Munaasabadani ayaa gabagabadii waxaa Shahaadooyin lagu gudoon siiyay in ku dhow 20 Saxafi oo ka kala yimid Warbaahinta Muqdisho iyo Gobolada Dalka Soomaaliya.
Previous articleDHAGAYSO : Faafahino ka soobaxaya werar alshabaab ay ku qadeen dagmada Buula barde ee gobolka Hiraan
Next articleBaasaboorka Soomaaliga Oo Aqoonsatay Dowladda Norwey